Lasa ny volabe saika hividianana fiara : olona dimy voapoizina, teny amin’ny hopitaly vao nahatsiaro tena | NewsMada
Lasa ny volabe saika hividianana fiara : olona dimy voapoizina, teny amin’ny hopitaly vao nahatsiaro tena
Olona dimy indray voapoizin’ny jiolahy ka tsaboina any amin’ny hopitalibe Toamasina, ny zoma lasa teo. Tao an-toerana vao mahatsiaro tena ary efa samy tsy tany amin’ izy ireo avokoa ny volabe nokasaina hamoahana fiara tao amin’ny serantsambon’ i Toamasina.
Tsy vao sambany ny nisiana fanapoizinana olona hamoaka fiara ao amin’ny serantsambon’ i
Toamasina tahak’ izao. Ea fanineniny amin’ izao ny trangan-javatra tahaka ity ary mitovitovy avokoa ny fomba fisehoany. Raha ny loharanom-baovao, nentin’ny olona mitonona ho “transitaire” afaka hamoaka ny fiara ao amin’ny seranantsambo ireo hividy fiara. Aorian’ izay, manao ny fanombanana ny vidiny sy fandaniana hamoahana azy izy ireo. Asain’ ireo mpisoloky manomana vola an-tanana ireo mpividy fiara, mbola ao amin’ny serantsambon’ i
Toamasina. Rehefa hitan’ ireo olon-dratsy ireto fa vonona ny vola, vonona koa ry zareo amin’ny zava-pisotro efa voapoizina hamelezana ireo lasibatra. Rehefa tsy mahatsiaro tena ireo, robain’ izy ireo ny volabe sy ny finday. Mipetraka ny fitoriana momba ireo olon-dratsy ireo.